Kunyorera Management Maitiro: CheddarGetter | Martech Zone
Vhiki rino ndakazowana nguva nechikwata pa Nhungirwa, inoshamisa tekinoroji incubator muBloomington, Indiana. Sproutbox yakavambwa nevamwe vepamusoro vanogadzira avo vakasarudza zvavaida uye zvavaive kugona kwaive kutora zano nekuriunza kumusika semhinduro. Ivo vanoita izvo chete zvekuenzana muzvirongwa zvavanofunga kutora kumusika.
Ini ndapinda nhasi semugumo wekupedzisira kwavo Zima… Chirongwa chavanofunga kuunza kumusika chinotevera. Uyu mukana unoshamisa uye chiitiko - nevapindi nevatongi vanobva kumativi ese epasi. Mumavhiki anotevera, ini ndinenge ndichivhara mazhinji ekutanga eSproutbox… mazhinji anofanirwa kubata nehunyanzvi uye mamwe zvakananga nekutengesa.
Imwe yebudiriro yeSproutbox ndeye CheddarGetter. Kunyangwe ini ndisiri fan hombe yechiratidzo (ndine hurombo Sproutbox :)), chigadzirwa chiri chepamusoro-notch. CheddarGetter inobvumidza mabhizinesi ane anodzokororwa mari modhi yekubatanidza, kuteedzera uye kubhadharisa vatengi vavo.
Rondedzero yezvinhu iri kupfuura kukosha kwebasa racho. Mutengo webasa iri wega wakanaka nekuti CheddarGetter inoenderana nePCI… asi ivo vanopa vatengi vavo chikumbiro chakasimba pamutengo wakati wevamwe vakwikwidzi.
CheddarGetter ndiyo yekutanga "plug uye kutamba" kunyoreswa manejimendi uye yekubhadhara system. Kunyangwe iwe uchimhanyisa high tech SaaS bhizinesi kana diki, sevhisi-based bhizinesi, Cheddar Getter ndiyo nzira kwayo yekutevera nekubhadharisa vatengi vako. Ingo plug muzvitupa zveakaundi yako yekutengesa, uye Cheddar Getter ichatanga kuchaja vatengi vako nekukasira. Kubva ku CheddarGetter nzvimbo.
Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira micro-kubhadhara, micro-kubhadhara, kubhadharisa kuwanda, zvinyoro-nyoro zvekushandisa, mashandisiro ekushandisa, kubhadharisa mari, zvirongwa zvemitengo, mitengo yemapati, mawedzero, zvipo zvinodzokororwa, dhisikaundi, kiredhiti-yenguva mitengo, otomatiki kubhadharisa, mutengo sekuru, kubhadharisa frequency maitiro ... rondedzero inoenderera nekuenderera.
Kuti utange, pane akati wandei REST API wrappers pre-yakanyorerwa PHP naRuby kuti vabatanidze yavo sisitimu nyore newebhusaiti yako, yako charity kana Software seSevhisi.
Tags: b2b mutengicadillacemail kunyoresaonline makwikwikuongorora kugutsikananokunyora magwaroweb makwikwi
Jon D. Mutauri
Dec 19, 2009 pa 11: 19 AM
Ndakashanyira SproutBox mavhiki mashoma apfuura, kwete nekuti ndine software chirongwa, asi nekuti ini ndinoshamiswa nemhando yavo. Iyo inonakidza nzira! Ini ndinodawo nharaunda yekugadzira yavakagadzira.
Zvita 19, 2009 na2: 34 PM
Jon, iyi zvirokwazvo inzira yepamusoro kune tekinoroji uye bhizimusi rekudyidzana! Ndakaona makambani mazhinji achirasa mari yakanaka yekudyara mukusimudzira kwakashata nekuti vaisaziva zvavanga vachiita. Izvi zvinobvisa yakawanda yenjodzi iyoyo!
Jun 9, 2011 pa 7: 11 PM
Mhoro Douglas -
Ndatenda nekuongorora kukuru! Munguva iyo kubva zvawanyora izvi, taenderera mberi nekuwedzera zvimwe zvinhu kuCheddarGetter, kusanganisira PayPal kubatanidzwa, iyo Quickstart wizard, yakapihwa mapeji ekubhadhara, uye nezvimwe! Isu tinotova nezvirongwa zviviri zvemitengo mitsva: yedu yekutanga Up hurongwa hwe $ 9 / mo, uye Blowing Up chirongwa che $ 79 / mo. Chikamu chakanakisa nezvezvirongwa izvi ndechekuti iwe unobvumidzwa mashandisirwo asingagumi nevatengi: chii chinosiyanisa zvirongwa imarii yaunotora, uye ndezvipi zvinhu zvaungade. Unogona kutarisa zvese zvakadzama zvezvirongwa zvemitengo apa: http://blog.cheddargetter.com/post/4211900640/new-pricing-plans.